Munamato weMwedzi Mutsva Uye Zuva reRusununguko | NZIRA DZOKUNAMATA
musha Munyengetero Munamato weMwedzi Mutsva Uye Zuva reRusununguko
Nhasi tichange tichitaurirana neMunamato weMwedzi Mutsva uye Zuva reRusununguko. Nhasi harina kufanana nemamwe mazuva ese, ndiko kutanga kwemwedzi mutsva uye zvakare izuva rekupemberera zuva Naijeriya yakava nyika yakasununguka. Pane akawanda mameseji ekuparidza pazuva rino, asi chakanyanya kukosha rusununguko nekutonga. Rusununguko chikamu chemazano aMwari kumunhu wese. Mwari vanonzwisisa kukosha kwerusununguko uye kuti runobatsira sei murume kushumira Mwari zvakanaka. Hazvishamisi kuti Mwari akaraira Mozisi kuti aende kuEjipita uye anoraira Farao kuti arege vanhu veIsreal vaende kuti vagomushumira zvakanaka.
Mwari vanonzwisisa kuti munhu anoda imwe nhanho yerusununguko nekutonga murume asati agona kushandira Mwari zvakanaka. Zvakare, Mwari vanonzwisisa kuti hazvigoneke kuti vanhu veIsreal vamushumire zvakanaka ivo vari mukutapwa, ndosaka Mwari vaida kuita chimwe chinhu nezve vana veIsreal. Zvakare, serudzi, hazviite kuti isu tibudirire kana tiri muhusungwa. Kunyangwe, kukoloniji hakusi kusungwa zvachose, kusvika padanho rakasununguka Kuda kwechero nyika yakakwenenzverwa ichatemerwa kudzamara vawana kuzvitonga. Saizvozvowo muhupenyu hwedu, kune zvimwe zvibudiriro izvo zvisingauye kusvikira tazosununguka kubva muhusungwa hwechivi uye nhapwa.
Kune vanhu vasingaverengeke vari kunamata zvine simba kuna Mwari kuti kuzadzikiswa kwevimbiso dzaKe. Zvisinei, chipingaidzo muhupenyu hwavo chinoramba chiri hutapwa hwechivi nehuipi uye kusvikira vasununguka, vanongonamata kuti hapana chichaitika. Netsitsi dzeWekumusoro soro, Mwari ngavakusunungure nemuzita raJesu. Simba roga roga rakakusunga kwenguva refu, inguva yekuti iwe uende, ini nefivha nesimba muzita raJesu iro simba rakadai rinodonha rofa izvozvi muzita raJesu.
Uyezve, iro bhuku raEksodho 6: 5 rinoti "Ndanzwa kugomba kwevana vaIsraeri, kwavanosungwa navaEgipita, uye ndarangarira sungano yangu ” Ichi chikamu cherugwaro chinotsanangura kurangarira kwaakaita sungano yake. Kwemakore vana veIsreal vaive mukutapwa uye Mwari akavasiya ipapo. Asi zuva ravakanyunyuta kuna mambo mukuru weIsreal, zuva ravakachema kuna Mwari waAbrahama, Isaka, naJakobho, ndiro zuva iro Mwari raakarangarira sungano yake ndokutanga kuita nhanho dzekusununguka kwavo. Nhasi tichashevedzerawo kuna Mwari, nhasi riri zuva iro nyika inopemberera zuva razvakasununguka, tichachema kuna Mwari. Zvakakosha kuti Mwari varangarire sungano yavo maererano neupenyu hwedu. Ndinonamata netsitsi dzaMwari, zvivimbiso zvese zvenguva refu, chibvumirano chese chekare pakati pako naMwari chave kuzadzikiswa, nechikonzero chemunamato uyu Mwari ngaarangarire ese muzita raJesu. Mhinduro iyoyo yawanga uchitarisira kwemazera, ndinoraira kuti nekupemberera zuva iri, Mwari ngavauye navo muzadziso muzita raJesu.
Zvakakoshawo kuti titange mwedzi mutsva nemunamato. Kwemwedzi wega wega, pane chikomborero chakanamatira pairi. Mwedzi wegumi unova Gumiguru wakakosha kwazvo. Mumwedzi wegumi, huwandu hwemvura hunodzikira mushure mekunge Mwari afashamira pasi uye misoro yemakomo yakaonekwa. Genesisi 8: 5 Mvura ndokuramba ichiderera kusvikira pamwedzi wegumi; nemwedzi wegumi, nezuva rekutanga remwedzi kwakaonekwa misoro yemakomo. Ndinoraira nesimba reWekumusoro-soro, dambudziko rese rakamedza iwe, wakasunungurwa muzita raJesu. Kune chikomborero chakabatanidzwa nemwedzi uno uye Mwari vakagadzirirwa kuita chinhu chitsva mumwedzi uno, dai icho chinhu chakanaka chisatombokunzvenga muzita raJesu.
Chekupedzisira, tisati tapinda muminamato, nyika yedu inodiwa Nigeria inoratidza makore makumi matanhatu mushure mekusununguka uye inofambira mberi haisati yaonekwa. Pane dikanwo huru yekuti isu tinamatire nyika yedu nhasi. Gumiguru 60 izuva rakakosha munhoroondo yenyika ino, tinofanirwa kupa zuva iri kunamatira nyika. Rangarira rugwaro rwakarairwa kuti tinamatire zvakanaka zveJerusarema kuti avo vanoida vabudirire. Nenzira imwecheteyo, tichave tichisimudza aritari yekunamatira kuNigeria uye ndinotenda Mwari vachapindura minamato yedu.
Kunamata Points kuNigeria
Ishe Jesu, tinouya pamberi penyu nhasi nekuda kwerudzi rwedu Nigeria. Nekuti rudo rwatinarwo kurudzi urwu rwakakura zvekuti hatigone kutarisisa kusaona kuri kuitika munyika. Mwari, Nigeria ndeyako, tinonamata kuti iwe utore nyika ino muzita raJesu.
Ishe Mwari, nhasi tinonamatira runyararo paNigeria, rugare murunyararo rwese, nzvimbo dzese dzemunharaunda, maguta ese, matunhu ese munyika, rugare rwaMwari ngarutange kugara muNigeria muzita raJesu.
Baba Tenzi, tinonamata kuti muparadze muvengi wese wenyika ino. Wese murume nemukadzi vane chinangwa chiri kushanda vachipesana nezvirongwa uye zvirongwa zvauinazvo zveNigeria, tinonamata kuti uchavaparadza muzita raJesu.
Baba Tenzi, tinoisa hupfumi hwenyika mumaoko enyu anokwanisa. Hupfumi hwenyika ndiyo hwaro hwerudzi rwese, baba tinonamata kuti imi mutibatsire kusimudzira muzita raJesu. Hugonye hwese hwedhimoni hwave kudya, dai moto weMweya Mutsvene waparadza gonye rakadai muzita raJesu.
Baba, tinonamata kuti muvape vatungamiriri vedu moyo wakarurama wekutonga nyika ino mugwara rakanaka. Tinonamata kuti muvape kushaya simba pavanokundikana, huchenjeri munzvimbo dzakakosha dzavanoda, Ishe, tinonamata kuti muve navo muzita raJesu uye muvabatsire kutonga nyika ino nenzira kwayo zita raJesu.
Chinyorwa chakanzi mubhuku raIsaya chitsauko 60: 1 Simuka upenye nekuti mwenje wako wauya uye kubwinya kwaMwari kwabuda pamusoro pako. Kwese uko muvengi akasunga kubwinya kwenyika ino, tinoraira rusununguko muzita raJesu. Izvo zvakanyorwa, Zivisa chinhu uye zvichasimbiswa, tinoraira kuti Nigeria ichamuka muzita raJesu. Rudzi urwu runogashira vhiri remweya raJehovha kuti rishande mukubwinya muzita raJesu.
Munamato Wemwedzi Mutsva
Baba Tenzi, semwedzi uno mutsva unoratidza rusununguko kuNigeria, ndinoraira rusununguko paupenyu hwangu muzita raJesu. Munzira dzese dzandakabatwa senhapwa, ndinopa rusununguko muzita raJesu. Kristu akati, murase uye umurege aende, ndinonamata kuti simba rese rakandisunga pane imwe nzvimbo, ndirasike uye ndiende muzita raJesu.
Ishe Jesu, ndinovhura maropafadzo emwedzi uno mutsva muzita raJesu. Maropafadzo ese awakarongerwa naMwari iwe mumwedzi waGumiguru, ndinopinda mairi muzita raJesu. Ndinozivisa kuti mwedzi uno uchazadzwa nekuseka, uchazadzwa nemufaro, uchazadzwa nemaropafadzo mazhinji.
Ini ndinouya kuzopesana nemabasa ese emuvengi mumwedzi mutsva, ndinoparadza zvirongwa zvese zvakaipa zvine chekuita nehupenyu hwangu mumwedzi mutsva, ndinozviparadza nemoto muzita raJesu.
Baba Ishe, zvivimbiso zvese zvenguva yakareba zvakafanira kuzadzikiswa, ndinoraira nesimba reWekumusoro-soro kuti zvichazadziswa mumwedzi uno muzita raJesu. Kubwinya kwangu kuchapenya mumwedzi uno mutsva nemuzita raJesu.
Gumiguru mwedzi wegumi, uye mumwedzi wegumi, mafashama akadzika uye Noa akaona makomo kekutanga munguva yakareba. Dambudziko rese rakandivanzira vabatsiri vangu, ndinotema kuti vaparadzwa nemoto muzita raJesu. Kubva nhasi, ndichave pachena kunoonekwa kune vandibatsire muzita raJesu.
Ishe Jesu, ndinonamata kuti imi mupe vaNigeriya moyo wekuda nyika kune nyika ino. Nyasha dzekuti vade nyika ino zvakanyanya, nyasha dzinozovasimbisa kuti vagare vachitsvaga kukura nekusimudzira kwenyika ino kuzvipa kune vese muzita raJesu.
Baba Tenzi, sezvo isu tiri vanhu vemarudzi akasiyana nezvitendero, ndinonamata kuti iwe ugadzire rudo rwako mupfungwa dzevaNigeri. Nyasha dzekuti tizvide isu sekuda kwakaita Kristu kereke, ndinonamata kuti iwe ugadzire urwu rudo mumoyo yedu muzita raJesu.
Ishe Jesu, ipai vese maNigeri nyasha yekusarasa tariro muhukuru hwenyika ino, nyasha kwatiri kuti tirambe tiine tariro yekuti mwanakomana akapenga achamuka zvakare, ndinonamata kuti mutipe tariro iyi muzita raJesu.
Ishe Jesu, ndinonamata kuti imi mutidzidzise kubudikidza nezvazvinoreva uye kukosha kwerusununguko kuitira kuti tirege kuzombodzokera kuhuranda, tidzidzisei kuti tinzwisise kukosha kwedemokrasi kuti tirege kudzokera kuhusungwa muzita zvaJesu.
Previous nyayaMinamato Yemari Inoshanda Pakarepo
inoteveraKunamata Kunongedzera Kurwisa Kushushikana